Zizomisa kanjani izimbali ▷➡️ Postposmo | I-postposm
U-Iris Gamen | 13/06/2022 13:38 | Izikhukhula
Kule post okuyo namuhla, Sizokwazisa ngezindlela ezahlukene ezikhona zokomisa izimbali. Ukwazi le nqubo kuzosisiza ukuthi singagcini nje ngokukwazi ukuzigcina nathi isikhathi eside njengenkumbulo yesikhashana esikhethekile, kodwa futhi zizoba yinto yokuhlobisa ekhaya lethu.
Ngokumiswa kwezimbali, sidlala ngemithetho yemvelo yomama, njengoba sigwema leyo nqubo yokubuna kwezimbali. Siyabonga ngokuwomisa, singagcina enkumbulweni yethu isenzakalo esibalulekile ekuphileni kwethu, kungaba usuku lokuzalwa, lokuzalwa, umshado, njll.
Cishe zonke izimbali zilungele ukomiswa, kodwa kukhona ezinye izinhlobo ezinikeza imiphumela engcono kunezinye, uma ufuna ukwazi ukuthi ziyini, ungakhathazeki, sizokutshela ngokushesha. Ukomiswa kwezimbali kungaba, njengoba sisanda kubalula, umsebenzi osiyisa enkathini esingasoze sayikhohlwa, kodwa futhi kuwumsebenzi ofundisa kakhulu okumelwe uwenze njengomkhaya, ukufundisa ngawo abancane ngokuhlukahluka nokunakekela. imvelo.
1 Isinyathelo ngaphambi kokumisa: ukuvuna
2 Yiziphi izimbali ezingcono kakhulu ukuze zomiswe?
2.2 Umshanelo Bloom
2.5 ukolweni owomile
3 Izindlela zokomisa izimbali
3.1 Izimbali ezomile ngokucindezela
3.2 umoya omisiwe izimbali
3.3 ilanga omisiwe izimbali
3.4 Izimbali ezomisiwe kuhhavini noma ku-microwave
Isinyathelo ngaphambi kokumisa: ukuvuna
Sizokunikeza uchungechunge lwamathiphu, ukuze uwacabangele lapho uqala inqubo yokomisa izimbali. Iqoqo lezimbali ofuna ukuzomisa kufanele lisikwe lapho ihlumela livuliwe nje.
Engeza, ukuthi Isikhathi esingcono kakhulu sokuqala leli qoqo ukuze zomiswe kamuva lezi zimbali ngezikhathi zasemini ngezinsuku ezinelanga.. Imbali evunwe ngosuku oluna noma oluguqubele, ekuseni noma ngemva kokuna, inomphumela wokuthi ingabola ngenxa yomswakama emaqabungeni.
Okunye okufanele kukhunjulwe ukuthi, uma imbali ezovunwa imise okwe-spike, kufanele ibuthwe lapho imiqumbe yazo engezansi ivuliwe futhi engenhla ivaliwe. Khumbula ukukha izimbali ngesiqu eside, ngale ndlela uzogwema ukuzifaka ngocingo.
Yiziphi izimbali ezingcono kakhulu ukuze zomiswe?
Kuleli qophelo lapho uzithola khona, sikulethela a ukukhethwa zazo ezinye zezimbali ezinhle kakhulu ezomiswa. Njengoba sazi kahle, kunezinhlobonhlobo zezimbali ezisebenzayo kakhulu kule nqubo.
Enye yezimbali ezifashini kakhulu, uma sikhuluma ngezingoma ezinezimbali ezomile. Ngombala wazo ophuzi onamandla, zithatha ukuhlelwa kwezimbali ziye ezingeni eliphezulu, zinikeze ukubukeka okujabulisayo nokusha. Khumbula lokho ziyizimbali ezizwela kakhulu ngoba uma zomile isikhathi eside zilahlekelwa kalula izimbali zazo ezincane.
Eyaziwa nangokuthi i-Cystisus scoparius, iyimbali evame ukusetshenziselwa izimbali ezomisiwe. I Imibala evezwa yile mbali iphakathi kwe-ocher kanye nohlaza oluphuzi, futhi inezimbali ezincane kakhulu, ngakho igcwalisa noma yimuphi umsebenzi owomile kahle kakhulu. Umsebenzi walesi sitshalo ukunikeza imiqulu emibhalweni.
Kulokhu, sikulethela i-classic evela emhlabeni wezimbali, i-lavender. Ngombala ogqamile kakhulu kanye nephunga elingalibaleki. Ngisho noma yomile, isaligcinile lelo phunga lesici esikhulume ngalo. Ungayisebenzisa njengento yokuhlobisa noma njengesinongo semvelo.
Nge umbala obomvu, le mbali imane iyisimangaliso okuzokwenza izingoma zingabi nesici. Lapho inani elikhulu lalezi zimbali lihlanganiswa, ukuthungwa okukhazimulayo okumangalisa kakhulu kwenziwa. Ingasetshenziswa kanye nezinye izitshalo noma umane uwedwa.
Okukodwa okusanhlamvu okwaziwayo kakhulu kithi sonke futhi kuvame kakhulu ukubonwa emisebenzini eyomile. I ama-spikes, asetshenziswa kakhulu ukuthungwa okungavamile okunakho, ngaphandle kwalokho bangadaywa ngemibala ehlukene ngendlela umuntu athanda ngayo.
Ngemibala ehlukahlukene ehlukahlukene, kusukela kobomvana kuye kophuzi kuya kokunsomi, i-Stantice iyimbali ethandwa kakhulu. Lesi sitshalo soma kahle kakhulu futhi sihlala isikhathi eside. kunoma yiliphi ikhona ngaphandle kokulimala. Uma ufuna ukudala izingoma ezinomthamo omkhulu, ungawuhlanganisa nanoma iyiphi enye imbali.
Ama-roses afaneleka inqubo yokomisa, kodwa khumbula ukuthi athambile kakhulu. Uma unazo ku-vase enamanzi, linda ukuthi lolu ketshezi luhwamuke, ngale ndlela uzozenza zome ngokwemvelo ngaphandle kokulahlekelwa umbala wazo oyigugu. Ziyizimbali ezihlinzeka ngomoya wothando kanye ne-bohemian.
Izindlela zokomisa izimbali
Uma ufuna ukwazi ukuthi ungomisa kanjani izimbali zemvelo, kungakhathaliseki ukuthi ziyingxenye yokuhlobisa noma ukunambitheka kwemvelo, kulesi sigaba uzothola Sizoqamba izindlela ezahlukene zokomisa.
Ngokuqinisekile ngaphezu koyedwa wethu uye wacabanga ukuthi inqubo yokomisa izimbali inzima kakhulu futhi iyinkimbinkimbi, ngoba ithatha isikhathi esiningi. Kodwa izinto azifani neze, Kunezindlela ezahlukene zokomisa ezilula kakhulu futhi ezisheshayo ukuzenza.. Kuye ngendlela ekhethiwe, ngeke kusisize nje ukunciphisa isikhathi sokusebenza, kodwa futhi kuzosinika umphumela wokumisa ohlukile.
Izimbali ezomile ngokucindezela
Le ndlela yokuqala esikulethela yona, Kuyinto yakudala futhi ingenye esetshenziswa kakhulu. Siyakuxwayisa ukuthi ayisheshi kakhulu, ngoba ithatha isikhathi. Kulabo abafuna ukusebenzisa izimbali zabo ezomisiwe izicelo zokubhala, ezifana ikholaji noma amabhukumaka.
Es Ngokufanelekile, izimbali ozisebenzisayo kule nqubo kufanele zibe izimbali ezincane futhi zingabi zikhulu kakhulu.. Ezinye zazo esikweluleka ukuthi uzisebenzise ama-lilac, ama-pansies noma i-lavender. Zonke izimbali ezinamacembe amahle kakhulu neziqu eziwugqinsi kakhulu ziyalahlwa.
Ukwenza inqubo yokomisa ngenqubo yokucindezela, kufanele ubeke izimbali ephephandabeni, iphephandaba ngezansi nangaphezulu. Lolu hlobo lwephepha luzomunca amanzi izimbali ezinawo futhi zizisize zome.
Uma usuvule iphephandaba, izolandela elinye lephepha lokusula nelinye lekhadibhodi. Uma usunakho konke, vala izinhlangothi ngosizo lwe-adhesive tape. Okulandelayo, khetha incwadi enkulu kunesonga, bese uyifaka phakathi kwamakhasi ayo. Beka isisindo phezu kwe-wrapper eshiwo, usebenzise isisindo esiningi kanye nengcindezi ngangokunokwenzeka.
Njengoba sesikutshelile, akuyona inqubo esheshayo, Lapho isonto noma ngaphezulu lidlula, kufanele ushintshe iphepha lokusula kanye nephephandaba ukuze uthole amasha.. Futhi bayophinde babekwe ngaphansi kwesisindo ababenaso. Ngemva kwesonto elilodwa noma amabili ngaphezulu, kuye ngembali kanye nobuningi, sizosusa isisindo kanye nokugoqa, futhi sizobe sesilungile izimbali zethu ezomisiwe.
umoya omisiwe izimbali
Uma ufuna ukulondoloza ivolumu yemvelo yezimbali, le nqubo ilungele yona. Ilungele izimbali ezinomthamo omkhulu nesiqu.. Le ndlela ingenziwa ngayodwana, okungukuthi, izimbali ngezimbali, noma ngesixha sezimbali ezingafika kweziyi-10.
Into yokuqala okufanele uyenze ukuhlanganisa izimbali zibe izixha. Uma izimbali zincane, sikweluleka ukuthi uziqoqe futhi ususe amaqabunga esiqwini, ngakho-ke kuzoba lula ukuphatha. Ngosizo lwentambo, bamba iziqu ngaphandle kokucindezela okukhulu ukuze uvimbele ukuthi zingaphuki noma zigobe.
Kanye ubophe i-corsage, okulandelayo okufanele ukwenze ukulengisa phansi endaweni efudumele, emnyama, eyomile futhi engenawo umoya.. Ngokuhambisana nalezi zimo, uzovimbela izimbali ukuba zingaboli futhi zilahlekelwe umbala wazo wemvelo. Uma uzomisa isixha esingaphezu kwesisodwa, khumbula ukushiya isikhala esanele phakathi kwazo ukuze zome ngendlela efanele.
Ngemuva kwezinsuku eziyi-15 noma ezingama-30, isixha sezimbali esilengayo sizokoma. Ukuze ukwazi ukuyihlola, thinta kokubili iziqu nezimbali ngokucophelela ukuze ungalimazi. Uma zine-texture e-crunchy, zilungile, okusele nje ukufaka uphawu lwezimbali kanye ne-bouquet eqediwe.
ilanga omisiwe izimbali
Lolu hlelo lokusebenza ifanele izitshalo ezinamakha futhi ishesha kakhulu inqubo yokomisa yemvelo. Kufanele ubeke iziqu zezimbali endaweni engaphezulu, okungcono ngokhuni, kufanele zihlukaniswe komunye nomunye ukuze zonke zithole ukukhanya okuqondile futhi zingene umoya. Gwema ukuwenza abe manzi noma ukuwashiya eduze nezindawo ezimanzi. Ngosizo lwesigameko esiqondile selanga, ngesonto izimbali zizobe zome ngokuphelele.
Njengoba ubona, kuyinqubo elula kakhulu, lapho asikho esinye isici esidingekayo ngaphandle kwezimbali nendawo yokhuni lapho zingabekwa khona. Ukuze uvimbele ukuthi bangaphephuki, ungabeka isisindo ekupheleni kwesiqu, kungaba amatshe noma ucezu lwe-adhesive tape.
Izimbali ezomisiwe kuhhavini noma ku-microwave
Kuhhavini, ungomisa zombili izimbali ezigcwele kanye namacembe azo. Kuthreyi ye-ovini kufanele uwasakaze ngaphandle kokumbondelana. Izinga lokushisa kufanele libe ngaphansi kwama-degrees angu-80, faka ithreyi ngezimbali bese ushiya umnyango wehhavini uvuleke kancane, ungawuvali. Lokhu kuzosiza ukushisa kuphele nezimbali zishise.
Ngakolunye uhlangothi, uma ukhetha ukusebenzisa i-microwave, kufanele ubeke izimbali esitsheni, kungaba ipuleti, ihlukaniswe kahle futhi imboze ngosizo lwefilimu esobala. noma isivalo esiphephile se-microwave. Zishiye cishe umzuzu ngamandla aphakeme kakhulu, uma ubona ukuthi akusona isikhathi esanele, engeza enye imizuzwana engama-20. Inani elikhulu noma elikhudlwana, isikhathi sokulinda siba side.
Uma usumile izimbali, ungenza ubuciko obungapheli nabo, kusukela kumdwebo, incwadi noma nje into yokuhlobisa yanoma yiliphi igumbi ekhaya lakho. Uma unquma ukusebenzisa ezinye zalezi zindlela esizitusile, ungangabazi ukusibhalela futhi usitshele ngolwazi lwakho. Khumbula ukuthi uma wazi noma iyiphi enye indlela, ungangabazi ukwabelana nathi ngayo.
Indlela ephelele ye-athikili: I-postposm » Izikhukhula » indlela omiswe izimbali